Semalt विशेषज्ञ प्रभावकारी Scrapper सफ्टवेयर मा विस्तृत
यदि तपाईंको डाटाले कस्टम निर्मित सेटअपको माग गर्दछ भने, सम्भाव्यता यो छ कि साधारण स्क्र्यापर वा कुनै DIY उपकरणले यसलाई राम्रोसँग कभर गर्न सक्दैन। उदाहरण को लागी, यदि तपाई अमेजन वा eBay बाट उत्पाद वर्णन, ट्याग, कीवर्ड र छविहरु को लागी स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले एक साधारण स्क्र्यापर उपकरण प्रयोग गर्नुको सट्टा डाटा विश्लेषक वा प्रोग्रामरको सल्लाह लिनु पर्छ। र यदि तपाईं केवल इन्टरनेटबाट उपयोगी जानकारी निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न सेवाहरूले निश्चित रूपमा तपाईंको काम सजिलो पार्दछ।
आउटविट हब एक साधारण स्क्र्यापर प्रोग्राम हो र इन्टरनेटमा सबै भन्दा राम्रो सेवाहरू मध्ये एक हो। यो फायरफक्स एक्सटेन्सन व्यापक रूपमा वेब सामग्री डाउनलोड गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार स्क्र्याप गर्दछ। एकचोटि पूर्ण रूपमा स्थापित र सक्रिय भएपछि, आउटविट हबले तपाईंको वेब ब्राउजरलाई विभिन्न वेब स्क्र्यापिंग र डाटा एक्स्ट्र्यासन क्षमताहरू दिन्छ। बक्स बाहिर, यस सेवाले असाधारण डाटा मान्यता सुविधाहरू राख्दछ र तपाईंको स्क्र्यापिंग कार्यहरू सजिलो बनाउँदछ। तपाईं यस सरल वेब स्क्रेपर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ दुबै डाईनेमिक र साधारण वेब पृष्ठहरूलाई लक्षित गर्न र केही क्लिकमा डाटा निकाल्न सक्नुहुन्छ, र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन।
२. वेब स्क्रेपर (गुगल क्रोम विस्तार)
यो इन्टरनेटमा एक उत्तम, शक्तिशाली र सरल स्क्र्यापर उपकरण हो। वेब स्क्रेपर मुख्यतया छवि, भिडियो, अडियो फाईलहरू, र इन्टरनेटबाट पाठ निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं यस सेवा ई-वाणिज्य साइटहरू लक्षित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र क्वालिटीमा सम्झौता नगरी उत्पादन विवरण र तस्बिरहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ। यो डाटा स्क्र्यापरको केवल नकारात्मक पक्ष भनेको योमा यसले स्वचालन सुविधाहरू प्राप्त गर्दैन - यसको मतलब तपाईं डाटा स्क्र्यापि sc कार्यहरू स्वचालित गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको कामको तालिका बनाउन सक्नुहुन्न।
के तपाई साधारण स्क्र्यापर खोज्दै हुनुहुन्छ? Spinn3r एक उत्तम वेब डाटा एक्स्ट्रक्टरहरू हो र दुवै कोडरहरू र गैर कोडरहरूको लागि उपयुक्त छ। Spinn3r को सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरू मध्ये एक यो उपकरणले fire ०% भन्दा बढी अनुक्रमणिका र वेब क्रलिंग कार्य प्रबन्ध गर्न आफ्नै फायरहोस एपीआई प्रयोग गर्दछ। साथै, तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईंको डाटा फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ वा छोटो-पुच्छर र लामो-टेल किवर्डमा आधारित वेब कागजातहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। आश्चर्यजनक रूपमा, यस उपकरणले तपाइँलाई असान्दर्भिक र बेकारको सामग्री झारपात गर्न अनुमति दिँदछ र एक समयमा धेरै वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरू सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
Spinn3r र वेब Scraper जस्तै, Fminer इन्टरनेट एक इंटरएक्टिव र सरल स्क्रैपर हो। उपकरण मुख्य रूपमा समाचार आउटलेटहरू र ट्राभल पोर्टलबाट जानकारी निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। यो राम्रो रूपमा यसको प्रोक्सी सर्भरको लागि परिचित छ र एजेक्स, रिडिरेक्ट्स, जाभास्क्रिप्ट, र कुकीजको साथ साइटहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम छ। यसबाहेक, फ्मिनर जटिल वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्छ र असंगठित र कच्चा जानकारीलाई संगठित र संरचित फारममा रूपान्तरण गर्दछ।
बोनस पोइन्ट - Dexi.io र ParseHub:
यदि तपाईं माथि उल्लेखित उपकरणहरूको परिणामसँग खुशी छैन भने, तपाईं या त Dexio.io वा ParseHub को लागि रोज्न सक्नुहुन्छ। डेक्सी एक वेब अनुप्रयोग हो जुन कोडनको आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग प्राविधिक ज्ञान छैन वा पाइथन र जाभास्क्रिप्ट सिकेन भने, तपाईं सजिलै इन्टरनेटबाट डाटा निकाल्न यो साधारण स्क्र्यापर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, पार्सेहब एक अत्याधुनिक, मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित छ र बिभिन्न वेब कागजातहरूको विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं यो सेवा एक पटकमा बहु वेब पृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई JSON वा CSV फाईलहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।